Compost laga sameeyay baalasha digaaga | Cusbooneysiinta Cagaaran
Bacriminta laga sameeyay baalasha digaagga
Milyan tan baadad digaag iyo kaarboon laba ogsaydh, oo ah qodob ka mid ah khalkhalka cimilada, ayaa sannad kasta lagu sii daayaa meeraha. Isku darka labada waxay u oggolaaneysaa helitaanka nooc cusub bacrimin mahadsanid habka kiimikada fudud, iyo waliba shey labaad oo loo isticmaali karo wakiilka biyaha celiya.
Adduunyada waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 19.000 milyan digaagga, taas oo laba jeer iyo badh ka badan tirada dadka. Isticmaalka digaagga 5 milyan oo tan oo baalal ah ayaa soo baxa sannad kasta. Intooda badani waxay ku dambeeyaan soo degsadyo halka ay ku dambeeyaan tobanaan sano.
Isbadal kadib balaastig ah, shidaalka hydrogen ku saleysan, walxo isku dhafan, adeegsi macquul ah oo cusub, ayaa waxaa soo saaray Isbadal Chen oo ka socda Jaamacadda Shiinaha ee Sayniska iyo Teknolojiyada ee Hefei, Gobolka Anhui, si loo soo saaro bacrimin.
Burburinta pyrolysis 1 g oo baadad ah 600º C 3 saacadood oo ku jirta kaarboon laba ogsaydh, 0,26 g oo ah bicarbonate de ammonium. Sheygan ayaa markaa loo isticmaali karaa inuu noqdo compost. Haddii lagu kululeeyo 60º C, way sii deyneysaa ammonia, Loo isticmaali karo sida compost.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » Bacriminta laga sameeyay baalasha digaagga
John Gunsha dijo
Maqaal aad u fiican oo aad ka heli karto macluumaad dheeraad ah mawduucan
Jawaab Juan Gunsha
Dib u warshadaynta qashinka waraaqaha iyo kartoonka
Tamar is-maamul, keydinta tamarta shaqsiyeed